March 19, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 19th, 2017'
Somaliland iyo Imaaraadka Carabta oo Maanta si Rasmi ah u Kala Saxiixday Heshiiskii Militeri ee Dekedda Berbera (Dhagayso)
March 19, 2017 – Waxaa maanta Masuuliyiin kasocda Somaliland iyo wakiillo metelayay dawladda Imaaraadka Carabta ay magaalada Dubai si rasmi ah ugu kala saxiixdeen heshiis ogolaanaya in magaalada Berbera Saldhig military ay ka furato dawladda Isku taga Imaaraadka Carabta. Heshiiskan ayaa daba socday go’aan ay labada gole ee baarlamaanka Somaliland dhawaan ku ansixiyeen qodobada is …
March 19, 2017 – Magaalada Ganacsiga ee Boosaaso ayaa waxaa maanta lagu soo bandhigay Markabkii ay afduubteen kooxo la sheegay inay ahaayeen burcad badeeda Soomaali ah, balse markii dambe looga guuleestay in laga soo furto Markabkaasi. Markabka oo lagu magacaabo Arra-13 ayaa dhawaan laga soo afduubtay badweynta Hindiya, waxaana burcad-badeedu ay ku soo xirteen xeebta …
Iska Horimaad Xoogan oo Dhexmaray Al Shabaab iyo Ciidamada K/Galbeed (SAWIRRO)
March 19, 2017 – Wararka inaga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Koonfur Galbeed iyo dagaalyahano katirsan Al Shabaab uu ka dhacay deegaan kuyaala inta u dhaxeysa magaalada Baydhabo iyo degmeda Qansax Dheere. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo katirsan Maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowlada …
Madaxweynaha Dalka Kenya oo Booqasho Aan Horey loo sii Shaacin ku Yimid Gudaha Dalka Soomaaliya (SAWIRRO)
March 19, 2017 – Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatt, ayaa maanta booqasho aan horey loo sii shaacin ku yimid Degmada Dhoobley ee Gobolka Jubbada Hoose, iyadoona uu kula kulmay Saraakiisha iyo Ciidamada Kenya, ee qaybta ka ah ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika. Madaxweynaha Kenya oo xirnaa dareyska Ciidamada Difaaca ee dalka Kenya, ayaa markii ugu …